CO2 Igwe Laser
Diode Laser igwe
755 + 808 + 1064nm diode laser removal machine
808nm diode laser mwepụ igwe
980nm diode laser vaskụla mwepụ
Eriri diode laser ntutu mwepụ igwe
Na-ekpo ọkụ ire ere
Multifunction IPL SHR E-Light igwe
Q gbanwere Nd Yag laser Tattoo mwepụ Machine
Igwe nlekọta anụ ahụ
Cryolipolysis ahu slimming igwe
Ihe osise EMS
RF Isi Slimming igwe
Agụụ RF Rolling cellulite Abụba iwepụ ịhịa aka n'ahụ ...
Nchịkọta ọrụ nke Plushape: 1. Infrared laser na-ebelata impedance akpụkpọ ahụ site na ikpo oku na ike RF abanye n'ime anụ ahụ nwere njikọ. Ngwakọta ihe mejupụtara nke laser infrared ma na-eduzi ike RF na-abawanye mgbasa intracellular oxygen site na ikpo ọkụ akpụkpọ ahụ. 2. agụụ plus pụrụ iche e mere rollers ịgbanwe aghụghọ eduga RF penetration na-ọbụna 5-15mm. N'otu oge, ihe mgbochi na igwe na-eme ka anụ ahụ na-agbatị ma na-agbatị ngwa ngwa njikọ fibrillar, dị irè ...
Kacha ọhụrụ Cavitation + RF + agụụ Slimming Machine ...
Hot ire slimming igwe agụụ Rollers RF cav ...
Theory 1. Infrared laser lowers akpụkpọ impedance site kpo oku anụ na RF ike penetrates miri n'ime connective anụ ahụ. Njikọ nke synergistic nke laser infrared ma duzie ike RF na-eme ka ikuku oxygen intracellular na-abawanye site na ikpo ọkụ. Teknụzụ nke agụụ na-eme ka akpụkpọ ahụ nwee ike banye na RF nwere ike ịbanye n'ime otu agbaji agbaji, na-eme ka mmetụta na nchekwa dịwanye mma, ọbụlagodi maka ọgwụgwọ mpaghara nkuchianaya elu. 4. agụụ plus pụrụ iche-e mere rollers ịgbanwe aghụghọ na-eduga ọbụna RF ...
Anti-merela agadi ndọlị Remover Face eweli Rada L ...
4Deepoo na-enye ọganiihu teknụzụ dị ukwuu na ọgwụgwọ ugboro ugboro na-agwọ ọrịa na agụụ na-enyere aka. N'adịghị ka teknụzụ Monopolar ma ọ bụ Bipolar RF, nke dị elu ma nwee ike bụrụ ihe na-egbu mgbu ma ọ bụ dị egwu na epidermis, 4Deepoo, na-enweghị mkpanaka ọ bụla mana site na ịkwanye mkpuchi na-edozi ahụ, na-anapụta ike ọkụ na-achịkwa nke miri emi n'ime ihe kacha nso, na-eru 48 Celsius. C ~ 58 ° C, nke nwere obere ikuku epidermal maka ezigbo, mmezigharị collagen na-enweghị mgbu. 4Deepoo na-egosipụta Dialectric ...
Mpi price HIEMT EMS ahụ contouring ele ...
Kedu ihe bụ HI-EMT? HI-EMT ngwaọrụ ezubere maka ebumnuche mara mma, nwee ndị na-etinye 2 (abụọ) nwere ike dị elu. Ọ bụ teknụzụ na-enweghị oke na nkwekọ ahụ na-adịghị emerụ ahụ, n'ihi na ọ bụghị naanị na-agba abụba, kamakwa na-eme ka ahụ sie ike. Ọzọkwa, ọgwụgwọ ahụ achọghị nrịnwụ ahụ, mbepụ, ma ọ bụ ahụ erughị ala. N'ezie, ndị ọrịa na-enwe ike ịnọdụ ala ma zuru ike, ebe ngwaọrụ ahụ na-eme ihe ruru puku crunch ma ọ bụ squat na-enweghị mgbu 20,000. Nkọwapụta Technology EMS Ọdụdọ Akwara Stim ...
Companylọ ọrụ anyị bụ ọkachamara na akpụkpọ anụ ụmụ nwanyị, iji dozie nsogbu akpụkpọ ahụ, ka ị gbanwee ebube.
LaserTell Teknụzụ (UK) Co., Ltd. bụ onye ọsụ ụzọ nke ntinye ego na ngalaba nke teknụzụ tozuru oke ịke Laser. Taa, LaserTell Teknụzụ (UK) Co., Ltd. bụ nnukwu ihe ọhụụ nke nkwado teknụzụ, ọrụ ire ere, ọzụzụ ahụike, ahịa, yana ịjụ maka ịwa ahụ kachasị mma na ahịa mara mma.
Ruo ọtụtụ afọ, anyị na-ejikọta ọkwa ọhụụ, nka na nghọta ndị ahịa karịa nke ụlọ ọrụ ọ bụla na ụlọ ọrụ anyị.
New Technology Laser Hair mwepụ na Fiber Te ...
Theory nke onye nkesa chọrọ diode laser 980nm ...
Kacha ọhụrụ Germany Ogwe epilation obere permanen ...
High Power 1500W nnukwu ntụpọ size Diode Laser ntutu ...
Kacha mma price 755 + 808 + 1064 diode laser ntutu remova ...
Ọkachamara 10600nm Fractional CO2 Laser denta ...
Ọnọdụ ụwa n'ofe mba 80 gburugburu ụwa
Kpọọ:0086-10-67837758 ma ọ bụ Email @:info@lasertell.com
Featured ngwaahịa, Sitemap, Opt Shr Ipl Nwepu Ntutu, Hifu Obere, Ipl Xenon Flash Oriọna, Iwepu Ntutu Lasa na Akpụkpọ anụ, 808 Nm, Ipl Laser Shr Nwepu Ntutu, Ngwa niile 30lọ 308, No.12, Jingsheng South 2nd Road, Tongzhou District, Beijing, China